2.1 Baro tirooyinka taban
Waxaan soo aragnay xaaladaha kala duwan ee loo isticmaali karo tirooyinka taban. Waxaan hadda soo qaadan doonaa dhowr tusaale waxaana lagu siin doonaa dhowr su'aalo oo aad ka fikirto jawaabahooda:
Haddii heerkulka maalin qabow ah uu yahay -4ºC, heerkulkuna uu hoos u dhaco 3ºC, immisa ayuu noqonayaa heerkulka cusub? Labada heerkul, kii hore iy kan dambe, midkee ayey kula tahay in uu ugu qabow yahay?
Haddii aad bangiga ka soo deynsato lacag dhan 150 000 kr, waxaa la oran karaa bangigu wuxuu kugu leeyahay 150 000 kr ama waxaa la oran karaa xisaabtaada lacageed ee bangiga waa - 150 000 kr. Haddana haddii aad isla bangigii ka soo deynsato 70 000 kr, maxay noqoneysaa xisaabtaada cusub ee bangiga?
Wiish aad saaran tahay ayaa waxa uu leeyahay calaamadaha kala ah -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 (0 waxay caadiyan u taagan tahay albaabka dhulka la siman ee laga baxo). Maxay u taagan yihiin -2 iyo -1? Dabaqee ugu hooseeya?
badda loo yaqaanno Badda Dhimatay waa 392 m oo ka hooseysa joogga badda. Maaddaama ay oogada baddu tahay 0 m waxaa loo qori karaa -392 m. Qeybo ka mid ah dalka Holland wuxuu ku yaalaa cabbir ka hooseeya oogada badda, meesha ugu hooseysa ee dalkaasi waxay badda ka hooseysaa 6,7 m oo loo qoro -6,7 m. Haddaba midkee baa Dalka Holland iyo Badda Dhimatay u dhow oogada badda? Sheeg labada tiro -6,7 m iyo -392 m midka weyn iyo midka yar?
Haddii dalka Soomaaliya uu saacad ahaan ku yaalo +3, marka la eego cabbirka GMT (Greenwich Mean Time), isla markaana ay saacaddu tahay 12 kii duhurnimo. Saacadda dalka Soomaaliya ma horeysaa mise waa dambeysaa. Waa immisa markaasi saacadda dalka Soomaaliya?